Where To Ona dzokubika Street Art In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Where To Ona dzokubika Street Art In Europe
Street muri munhu ano chimiro romubati mashoko chinoita maguta edu zvikuru yakanaka. A mugwagwa seinäkartta akanaka anogonawo kukukurudzira kufunga nezvenyaya inokosha munzanga kana nezvechiitiko mabasa dzenhoroondo vanatenzi.
Maguta Europe izere nzvimbo huru muchifashukira uri mumugwagwa uye ezvivako. Unogona kutora nguva inofamba kuburikidza mumigwagwa brimming pamwe murals uye Haumbomuki kufinhikana. Pano pane unyanzvi mumugwagwa zvinonakidza uye apo kuona muna Europe:
Street Art muLondon
London chimwe chezvinhu kukwezva maguta avo vanokoshesa makanaka mumugwagwa uye vemifananidzo pachavo. Pakati mumigwagwa unogona kushanyira kuwana dose wako naka iwe, Camden uye Shoreditch vamire panze. zvisinei, Brick Lane uye Southbank kunozivikanwa dzokugara, wo. Still, kana uri kutsvaga yakakurumbira nzvimbo, musoro Shoreditch.
Paris azere penzira muri inopisa nzvimbo, sezvo kazhinji kureba migwagwa yose. Musoro rechi10 uye rechi11 arrondissements kuburikidza Rue Saint-Maur. Ndizvo azere Shepard Fairey Portraits-chena dema-uye pamadziro zvezvivako, izvo zvinoita famba huru. Izvi 2km refu mumugwagwa intersects pamwe Rue Oberkampf, inonakidza nzvimbo kubva unyanzvi mumugwagwa maonero.
Berlin raMwari East Side garari nderimwe chakanakisisa nzvimbo munyika avo vanofarira dzomumaguta ndimi. Guta pacharo rine vaizvambarara mumugwagwa uri Chiitiko, zvichida zvakanakisisa akaratidzwa muna Kreuzberg uye Mitte. Pane maruwa maviri inofadza yomukati alleyways uye iconic uri mumugwagwa zvidimbu. Musoro rokumabvazuva kumagumo Kreuzberg woruwa kuwana zvakanakisisa unyanzvi.
Rome rwave paneshongwe mugwagwa kubvuma uri mumugwagwa, asi guta rino rakanaka zvino pakupedzisira kubvumira madhorobha unyanzvi creatives kutaura pachavo. Kune vashoma maruwa apo uri mumugwagwa kwave zvishoma nezvishoma cropping kukwira. zvisinei, nzvimbo yakanakisisa kuti kushanyira ingava San Lorenzo, munharaunda ine zvizhinji noutano ezvivako. zvauri kana kushanyira Roma vachitsvaka unyanzvi mumugwagwa yakanaka, kufunga Via Enotri, Via Ausoni, Via achi Sardi uye Via Dei Sabelli.
MuFrankfurt ndiro guta mumwe arege kuwana dungwerungwe kuti uri mumugwagwa Zvokutopenga, sezvo ine zvimwe wakanaka wokuva munhu bhizimisi rakanga. zvisinei, munhu aigona nharo kunyange maguta akaita kuti vanogona kuva simba uri mumugwagwa okuti, zvikurukuru akavamukirawo nenguva imwe kudhura kwezvinhu. MuFrankfurt ane yakawanda mumugwagwa uri akapoteredza chiteshi chechitima uye pakati peguta. The Hall Vakakurumbira musi Ratswegkreisel ndiyo imwe nzvimbo yakanaka kushanyira.
Amsterdam kuti mugwagwa uri Chiitiko rakanyatsojeka simba, uye mumadhorobha ndimi rinosvika kunyange miziyamu Exhibits. The yakanakisisa nzvimbo Amsterdam nokuti uri mumugwagwa ndivo Spuistraat, Wijdesteeg, uye NDSM, kusanganisira peguta munzvimbo. Munokwanisa kutora unyanzvi mumugwagwa rwokuparidza achibva Amsterdam Central Station. Chokwadi chokuti vanozoona ichi aripo anokuudza zvakakwana sei kudada guta iri mifananidzo yaro mugwagwa.
Copenhagen ndiro guta guru kana uchida kuona mamwe mavara uye zvakasikwa uri mumugwagwa - zvichishanyira misha yevanhu! Christiania ndimo uchawana zvakanaka mabasa matarenda dzomumaguta Artists, saka iva nechokwadi kuti musazvipotsa.
Kana wagadzirira kuona zvakanaka uri mumugwagwa Europe ine kupa; maguta iwayo ose vari nyore nechitima. Book matikiti zvenyu pamusoro nguva uye gadzirira kuti kufarira!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-street-art/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Copenhagen muFrankfurt Graffiti London Street Art travelamsterdam travelberlin travelparis travelrome